अर्थतन्त्रमा सुधार, होला त समृद्धिको सपना पुरा ? – Mission Khabar
अर्थतन्त्रमा सुधार, होला त समृद्धिको सपना पुरा ?
मिसन खबर १२ जेष्ठ २०७५, शनिबार १६:५६
काठमाडौं, जेठ । चालु आर्थिक बर्षमा मुद्रास्फीति संगै व्यापार घाटा बढ्ने आकलन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढने अपेक्षा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौमहिनाको तथ्याङको आधारमा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको आँकलन सार्वजनिक गरिएको हो । कुल पुँजी निर्माण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ५१ दशमलव सात प्रतिशत कायम हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।
विभिन्न आर्थिक सुचकहरुको अनुमान यस्तो छ :
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा औसत उपभोत्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव एक प्रतिशत छ । गत वर्ष भन्दा यो वर्ष तरकारी, फलफुल र दुधजन्य पदार्थको मुल्य बृद्धिहुदा मुद्रास्फीति चार दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ । गैर खाद्य मुद्रास्फीति ५ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेपनि नगत बर्षभन्दा घटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल निर्यात ८ दशमलव २ प्रतिशतले बृद्धि भई ५९ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अलैंची, धागो, पोलिस्टर यार्न, अदुवा, तार लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ , आयात गत वर्ष भन्दा २० दशमलव छ प्रतिशतले बढेर ८ सय ७६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा, यातायातका साधन, सिमेन्ट, लगायतका बस्तुको आयात बढेको छ भने कृषि औजार लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । यसले व्यापार घाटा अझै बढ्ने देखिन्छ ।
आप्रवाह भने बढेको छ । नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव छ प्रतिशतले बढेर ५ सय ४० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि ६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नौ महिनामा नगद प्रवाहमा आधारित नेपाल सरकारको बजेट बचत ११ अर्ब ८३ करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा बढन गई १ खर्व १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।